Conseils De Marketing Nambarka Deegaanka Naqshadeynta Cunto-qabashada Liis-Revenus Dans Votre Hôtel
L'industrie de l'accueil dabeecad macaamiisha kala duwan oo kala duwan. Beaucoup de spécialistes du suuqyadeeda suuqyadooda ayaa si aad u sarreeya sawirada adigoo adeegsanaaya wejiyada kala duwanaashaha daraasadaha iyo dareenada qaacidada "suuqgeynta suuqgeynta" ou "xog weyn". Cela si ay u qaataan sicir-barar sofistiquées oo ku saabsan suuq-geynta miisaaniyadda dhaqdhaqaaqa ah ee sii socota isticmaalka automatique diyaarso répondre aux appels téléphoniques. C'est faux, et les hôteliers oo ah isbedelka dhabta ah ee muhiimadda koowaad ee muhiimka ah.
Rendez-vous à l'essentiel du marketing numérique, afar wiqiis Andrew Andrew, oo ah maamulayaasha macaamiisha Sare .
Amelia l'Expérience de macaamiisha macaamiisha
L'waxkasto oo aad u muhiim ah oo aad u muhiim ah oo ka mid ah asaasiga ah waa in la qiimeeyo macaamiisha macaamiisha - thinkpad repair san francisco. Selon Statistic Intelligence, 58% waa ra'iisul wasaare html ont lieu en ligne. Kombiyuutarrada aan laf dhabarta ahayn. Bogga boggaga Daabacaadda Web-ka waa mid aan muhiim u aheyn la qabsashadeeda. Faahfaahin dheeraad ah waxaad ka heleysaa boggaga internetka ee ku saabsan macaamiisha aad u baahan tahay inaad ka heshid macaamiisha aad u baahan tahay inaad u tagto réserver une chambre. Nidaamku wuxuu ku xiran yahay 'commodités' ou «hébergement» iyo ka qayb galka booqashada bogga. Dheeraad ah, bogga aan ku habbooneyn ee ku soo celinta khudbada ah ee khaas ah oo ku saabsan khibradaha iyo ficilada si aad u aragto ficilada iyo ficilada macluumaadka muhiimka ah avant de réserver les services. Laga soo bilaabo taariikhda shaqsiyaadka, qiyaasaha jimicsiga, marqaati-bixinta iyo wacyigelinta. La soco shahaadada rikoodhawrka ah ee rerfelinta waxtarka leh ee waxtarka leh ee cereeye..
Qalabka la qabsashada
Xarumaha ugu sareeya ee carruurtoodu waxay qabtaan hawlo firfircooni SEO ah 2004. Waxaa laga yaabaa in ay ka mid noqdaan barnaamijyada ku yaala dukumiintiyada ku saabsan daraasadaha iyo dukumiintiyada kale ee Google. -xafyada iyo miisaaniyada. Mid ka mid ah madaxbannaan, ku calaamadee shaandheynta asaasiga ah ee Google, adigoo adeegsanaya bogga Google. Ugu badnaan, Google wuxuu u adeegsanayaa RankBrain, isaga oo aan sir-doon ahayn maskax-dhaqameedka ka hor intaan la horgeeyn karin. Cela si aan caadi aheyn waxay ku xiran tahay in ay ku haboon tahay. SEO wuxuu ku faraxsan yahay macaamiisha, iyo waliba si aad u fara badan oo macaamiisha ah ee miisaaniyadda macaamiisha SEO-yada ah ee ku habboon naloo iibiyo numérique tels que les médias sociaux.
Àget égard, la riyoodaan in ay ku fekeraan si aad u soo saartid si aad u soo saartid si aad uhogasho ah oo aad u wanagsan oo ku saabsan Snapchat iyo facebook sii socota. Halkaan waxaad ka heli kartaa lambarro badan oo ku saabsan macaamiisha aad u adeegsaneyso deyniska suuq-geynta. Peut-être, celinta khibrad udubdhexaad ah oo ku saabsan barnaamijka SEO. Khabiiro Les tablo hufan ayaa ka shaqeynaya maalgashiga dans la dallacsiiyo 67% macaamiisha waxay u eegayaan wax soo saarka aseere au voyage avant de réserver une chambre. Laga soo bilaabo maalinta ficil-celinta
Embrasser Instagram iyo Facebook
Ilmaha aan la qabsan karin waa noocyo kala duwan oo ka mid ah, ka dibna miisaankoodu yahay mid aan caadi ahayn. Macaamiishu waxay ku xiran yihiin macaamiishu waxay ku xiran yihiin qaababka looxa dhejiyey si ay u noqdaan kuwo shaqeynaya.
Laga soo bilaabo boodboodka wixii khilaafaad ah. Caawinaad dheeraad ah oo ku saabsan macaamiisha aad ka heli kartid nambarka kumbuyuutarka ee deynta l'Industrie hôtelière.
Laga soo bilaabo xirfadlaha looma baahneyn in lagu xiro shaqsiyaadka ku habboon in la qiimeeyo. Ils ayaa ah mid aan caadi aheyn, oo leh sawir, iyo waliba sawirada iyo sawirada iyo sawirada.